FIRAISAN-TENDRON’NY ANDRIMPANJAKANA :: Manohitra ny hisian’ny tetezamita vaovao ny Filoha mpisolo toerana sy ny governemanta • AoRaha
FIRAISAN-TENDRON’NY ANDRIMPANJAKANA Manohitra ny hisian’ny tetezamita vaovao ny Filoha mpisolo toerana sy ny governemanta
“Isika tsy hana- sarotra fiainana izany mihitsy”. Io fehezan-teny io no noentin’ny Filoham-pirenena mpisolo toerana, Rakotovao Rivo, mikasika ny fampi- rindrana ny fitantanana ny firenena taorian’ny fametraham-pialan’ny Filoham- pirenena teo aloha, Rajaonari- mampianina Hery.
Noantitranterin’ity filohan’ny Antenimieran- doholona teo aloha ity fa efa voasoratra ao anatin’ ny Lalàm-panorenana avokoa ny anjara asany sy ny an’ ny Praiminisitry ny marimaritra iraisana momba ny fitantanana ny raharaham- panjakana. Notoheriny avy hatrany ny mety hisiana fifanarahana pôlitika miala amin’ny voalazan’ ny Lalàm-panorenana. “Tsy tetezamita vaovao akory no atao eto amintsika. Mijanona amin’izay voa- lazan’ny Lalàm-panorenana ny andraikitry ny Praiminisitra. Izaho rahateo tsy Filoham-pirenena fa mpisolo toerana fotsiny ihany ary voafetra ny fahefana omen’ny lalàna ny tenako . Tsy azo atao mihitsy ny tsy fanarahan-dalàna”, hoy izy tsy nisorona taorian’ny famindram-pahefana tamin’ny filohan’ ny Antenimierandoholona vaovao Andriambololona Mananjara, tetsy Anosy, omaly. Notsindrian’ny Filoham-panjakana mpisolo toerana, Rakotovao Rivo ihany koa fa ny fampandehanana ny fifidianana filoham-pirenena no laharam-pahamehana amin’ny fitondram-panjakana misy ankehitriny.
Araka izany, samy miray feo amin’ny fanoherana ny fitakiana amin’ny fanemorana ny fifidianana ny Filoham-pirenena mpisolo toerana sy ny Lehiben’ny governemanta ankehitriny. Tsy hilefitra amin’ny fitakiana ataon’ ireo kandidà mihevitra ny amin’ny tokony hisian’ny fikaonan-doham-pirenena hoentina mametraka lasitra hitondra an’i Mada- gasikara any amin’ny tena fampandrosoana izy ireo.
Mazava ihany koa ny firaisan’izy ireo hevitra amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena momba izany. Raha tsy misy ny fiovana dia anio amin’ny 11 ora maraina no hana- tanteraka ny famindram-pahefana ôfisialy, eny Iavoloha, ny Filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina Hery sy ny Filoham-pirenena mpisolo toerana, Rakotovao Rivo.
Fifidianana filohan’ny antenimiera Kandida tokana no hatolotry ny vondrona IRD
Ny madilana mampamerin-keloka